पेन्सन बुझ्न आफन्तको शबनै बोकेर कार्यालयमा पुगेपछि…. « Etajakhabar
पेन्सन बुझ्न आफन्तको शबनै बोकेर कार्यालयमा पुगेपछि….
पैसाका लागि मानिसले के के सम्म गर्दा रहेछन् भन्ने उदाहरण दक्षिणपूर्व आयरल्यान्डकाे एक कार्यालयकाे घटनाले उदाङ्गाे पारिदिएकाे छ । यहाँका एक मानिसले पेन्सनका लागि मृत मानिसलाई पनि जीवित रहेकाे भन्दै पेस गरेका छन् । याे घटनाको साक्षी दक्षिणपूर्व आयरल्यान्डको कार्लोका बासिन्दा बनेका छन् । मृत्यु भइसकेका व्यक्तिलाई ह्विल चेयरमा राखेर उनका आफन्तले पेन्सन दाबी गर्न कार्यालय पुगेका हुन् ।
६६ वर्षीय ती वृद्ध त्यहाँ ल्याउनु अघिल्लो दिनसम्म जीवितै थिए । तर, घरबाट कार्यालय ल्याउने बेलासम्म उनी जीवितै थिए वा मृत थिए भन्ने बारेमा प्रहरीले अनुसान्धान सुरु गरेको छ । उनलाई बोकेका व्यक्तिहरूले भने उनको कार्यालयमा आईसकेपछि मृत्यु भएको दाबी गरेका छन् । डोयललाई जीवितै देखाउन उनको अनुहार र शरीर ढाकिएको प्राप्त विवरणमा जनाइएको छ ।